Budata Microsoft Malicious Software Removal Tool maka Windows
Budata Microsoft Malicious Software Removal Tool
Free Budata maka Windows (49.41 MB)
Budata Microsoft Malicious Software Removal Tool,
Ngwá Ọrụ Iwepụ Ngwanrọ ọjọọ nke Microsoft bụ mmemme nchọpụta na mwepụ nke malware.
Ihe mmemme a na -enyocha kọmputa gị nke ọma wee nwaa ihichapụ malware ọ bụla mgbe achọpụtara ya. Mmemme a anaghị egbochi sọftụwịa ọjọọ ịbanye na kọmputa, kama ọ na -achọpụta ma na -ehichapụ ndị nke dị adị.
Akụrụngwa a nwere interface yiri ọkachamara ma na-eduzi gị nịchọpụta malware. E depụtara malware na -ehichapụ achọpụta na mpio nke mbụ.
Ngwa mwepụ ngwanrọ ọjọọ nke Microsoft nwere nhọrọ nyocha 3 dị iche iche. Na ọnọdụ Ndenye, ị nwere ike mechie nyocha ngwa ngwa, chọọ nke ọma na nyocha zuru oke, ma ọ bụ nyocha dị ka mmasị gị si dị. Mgbe nyochachara, mmemme ahụ na -enye gị akụkọ zuru ezu.
Microsoft Malicious Software Removal Tool Ụdịdị
Nha faịlụ: 49.41 MB